Ungayisebenzisa kanjani indlela entsha yokwakhiwa kukaSemalt futhi uyisebenzise ukukala phezulu kuGoogle
Kuthatha ama-millisecond angama-50 kubasebenzisi ukuthuthukisa umbono wewebhusayithi yakho. Abasebenzisi bafuna isikhombimsebenzisi sokusebenziseka lula kumasayithi abo. Yize lesi kuseluleko esihle ngesici esisodwa sewebhusayithi yakho, uSemalt usebenzise lokhu kuwebhusayithi yabo entsha.
Ikhasi le-web elisha likaSemalt lifuna ukuhlanganisa umklamo omfishane, wesimanjemanje nesikhombimsebenzisi ekufundeka kalula. Ngalo mklamo, uSemalt ukwenze kwalula ukuqonda ukuthi bangakuthola kanjani phezulu kwaGoogle.
Ukubuyekezwa Okusheshayo kwe-SEO terminology
Ngaphambi kokuthi singene kakhulu enyameni yesihloko, kubalulekile ukuba nokuqonda okuningana kwe-jargon edingekayo. I-blog yethu inayo umhlahlandlela obanzi ku-SEO uma ufisa ukumba ngokujulile kwizisekelo. Kule ndaba, sizodlula ezinye izincazelo eziyisisekelo.
I-SEO imele i-Search Enjini. Kuyinqubo yokwenza iwebhusayithi yakho ibe lula ukusesha ku-inthanethi.
I-AutoSEO ingumkhiqizo okhishwe yiSemalt eyenzelwe labo abafuna ukungena kwi-SEO ngaphandle kokutshala imali eningi.
I-FullSEO yinguqulo ethuthukisiwe ye-AutoSEO egcizelela ukusebenza nochwepheshe we-SEO kanye nomphathi.
I-SSL isici sokuphepha esenza idatha yamakhasimende igcinwe kuwebhusayithi yakho iphephe kakhudlwana.
Amagama angukhiye amagama noma amabinzana athile abantu abangawafuna lapho bethola iwebhusayithi yakho.
Okusobala yiliphi isikhundla ikhasi lakho, noma igama elingukhiye elivela kuyo injini yokusesha.
Ithrafikhi yinombolo yabantu abavakashela isayithi lakho.
Ukuqonda iwebhusayithi entsha ye-Semalt
I-AutoSEO, i-FullSEO, kanye ne-SSL kuseyimikhiqizo esetshenziswa yiSemalt ukucindezela isiza sakho. Njengoba kushiwo kubhulogi lethu lokugcina ngesihloko, konke lokhu kuyimikhiqizo egunyaziwe enerekhodi lokuphumelela lokufakazelwe. Uma ufisa ukuthola imininingwane eminingi kulayini womkhiqizo, sicela ubuke okuthunyelwe okudala.
Kule blog, sizogxila ekubukeni izinto ezintsha nezinto zokwakha zewebhusayithi entsha. USemalt usebenzise ezinye izinto ezihlaba umxhwele ezikufanele ukudlula zonke.
Amakhasi Wenjini Yokusesha (i-SERP)
Ukuhlola Ikhasi Lobunye
Kwabaphathi beWebhu beGoogle
Ukuhlaziya Isivinini sekhasi
Ukuqonda ideshibhodi entsha ye-Semalt
Ideshibhodi entsha isenokuhlunga okuningi okunamandla kusuka kokudala. Umehluko obalulekile uvela ekushintsheni esibonakalayo esigcizelela izidingo zomsebenzisi.
Njengoba uskrolela phansi, uzoqaphela ukuthi mangakhi amagama akho angukhiye aphezulu 1, 10, 30, no-100. Le deshibhodi ikunikeza umbono wokuthi ayini amagama akho okwenza kahle. Ungasebenzisa lolu lwazi ukugcizelela amagama angukhiye athile, aseshekayo.
Ungathola ukuthi iqoqo lamagama angukhiye lisiza kakhulu ekuletheni ukuthengiswa okuguqukayo kuwebhusayithi yakho. Ideshibhodi ye-SEO kaSemalt ingakusiza ekuboneni ukuthi imaphi amagama angukhiye abalethela ithrafikhi ethe xaxa. Kuhlanganiswe nedatha enanini lokukhokhelwa kuwebhusayithi yakho, ungathola ukuthi ukhanga uhlobo olungafanele lwethrafikhi.
Ukuqonda Ikhasi Lemiphumela Yenjini Yosesho (i-SERP)
Ikhasi Lomphumela Wenjini Yokusesha likunikeza imininingwane eningilizayo yokuthi ikhasi lakho le-web lifaka kanjani lapho usesha. Kukunika imininingwane eningilizayo yokuthi yiziphi amagama okhiye abekwe nokuthi aholela kanjani ekhasini lakho. Inikeza nemininingwane engatholakali namanye amawebhusayithi amaningi we-SEO: imininingwane yabaqhudelana.
Unganquma nokuhlela lokhu kuqhathaniswa ngenjini oyithandayo. I-Google iyinjini yokuqala yokusesha emhlabeni, kepha uma uthola izithameli ezingaba khona ngokusebenzisa i-Yahoo noma i-Bing, ungathola amagama angukhiye athile ukuze ubekwe kangcono lapho. Ungafuna ukudala umkhankaso ofuna ukushaya izimbangi zakho kuzo zonke izinjini ezintathu.
Uma ubheka i-SEO, uSemalt uyaqonda ukuthi idatha iyikho konke. Izinkampani eziningi zizokusiza ekwenzeni amaphrojekthi we-Google AdWords, kepha lokhu kuyikhambi lesikhashana nje. Izikhangiso ngeke zithuthukise ukufunwa kwesiza sakho ngokuhamba kwesikhathi, kepha zikunikeze ukukhuphula isikhashana okuphela ngemali. Amawebhusayithi akhiwe nge-SEO engqondweni ngokwemvelo afinyelela phezulu kulawa makhasi futhi azoqhubeka nokukala phezulu ngokulungiswa okuvamile.
Kuyini Ukuhlolwa Kwamakhasi Ekhasi?
I-SEO yinto edinga ukuthi ube ngokwahluka ngobuciko ngenkathi ibuye ifane nezimbangi zakho ezingena ngamagama asemqoka.
Ababhali be-SEO abaqeqeshiwe bakaSemalt bayayibona le nkinga ngokukunikeza amagama angukhiye ahlukile azobalwa ngenkathi futhi enikeza ababhali abangabhala okuqukethwe okukhethekile. I-SEO ibhalansi entekenteke, kepha uSemalt usevele unamacala akhuluma ngempumelelo yawo.
Isibonelo, ake sithi ubungumlobi wokuqukethwe ozimele owayesanda kungena ebhizinisini, kepha udinga usizo oluncane ukuze ikhasi lakho libe sezingeni. Ngezansi kuncane okucashunwe ekhasini lakho okuskenwe ngukuhlola okuhlukile kwekhasi lewebhusayithi entsha ye-Semalt.
Uzoqaphela ukuthi kunamaphuzu avelele ngaphezulu kwekhasi. Ngemuva kokuyisebenzisa ngokuhlola okuqukethwe, iye yabona ukuthi lezi zingxenye zikwezinye izindawo kuwebhu. Ngenxa yalokhu, ubukhulu baleli khasi buwubukhulu bungamaphesenti ayi-13.
Injini yokucinga isengozini enkulu yokuqukethwe uma kubhekwa njengokugunyaziwe noma ngumthombo othembekile. Enye indlela injini yokusesha enquma ngayo lokhu ngokwahluka kwento. Ngenkathi i-SEO izimisele ukubheka amagama asemqoka afanele, amasayithi amaningi angabelana ngawo, iwebhusayithi engakwazi ukuvela phakathi kwesixuku izoqhubeka nokuma kahle.
ISemalt yinkampani ekwazi lokhu. Ngokuhlanganisa lokhu ne-SERP yethu, singakwazi ukuthola ukuthi ngabe kudingeka ushintsho lwecebo noma cha. Ungahle ube namandla ngokwanele ukukala ku-100 ephezulu ngokubheka okulinganiselwe ngalokhu. Futhi, eziyishumi eziphezulu zizodinga ibhizinisi lakho ukuhlukanisa ngokuqondisa amagama angukhiye eceleni kokuqukethwe okungafani nalutho.
Ukulandelela i-Google Webmasters ngeSemalt
Njengenye yezinkampani ezinkulu emhlabeni, ungahle wazi ukuthi i-Google inamathuluzi amaningi wokuqapha ukusebenza. USemalt ufuna ukwengeza lokho kusebenza ngokusebenzisa ithimba lakhe lochwepheshe be-SEO kanye nabaphathi ukuthuthukisa lokhu. Futhi, kulabo asevele ngaphansi kohlelo lwe- webmaster , uSemalt unesixazululo sakho.
Ngokulanda ifayela le-HTML kuwebhusayithi yabo futhi ulilayishe kuwebhusayithi yakho, uSemalt angakwazi ukulandelela imininingwane enemininingwane eminingi. Ungase futhi ukhethe ukunamathisela i-HTML kusayithi lakho. Uma kukhona ukudideka mayelana nale nqubo, zizwe ukhululekile ukufinyelela ku- imeyili yabo yokusekelwa kwamakhasimende. Uma ukhetha esinye isiteshi, imininingwane yabo yokuxhumana ingaphansi kwekhasi ngalinye.
Futhi, ukulayisha idatha ngqo ku-Semalt kunciphisa inani lezindawo lapho ulandela khona idatha yakho. Ngaphambi kwalokhu, kungenzeka ukuthi ubekhona kudeshibhodi eyodwa yewebhusayithi yakho, iphaneli eyodwa yokuhlaziywa kwegama elingukhiye, nenye yedatha ye-sitemap. NgoSemalt, konke lokho kusayithi elilodwa.
I-Speed Speed Analyzer nokuthi ingayithinta kanjani i-SEO yakho
Uma kukhulunywa nge-SEO, cishe awucabangi ngejubane lekhasi lakho elinomthelela omkhulu. Noma kunjalo, isilinganiso sokulayisha sekhasi lakho sinomthelela omkhulu ku-SEO.
Isihluthulelo sisegama elithi "ukwenziwa kahle", indawo enziwe kahle kakhulu ingenazo izixhumanisi eziphukile, izihibe, nemithwalo ngokushesha. Lapho iqembu likaSemalt labachwepheshe be-SEO linokufinyelela kuwebhusayithi, ukuhlaziya kwabo kuzokwembula la maphuzu aphukile futhi kuqinisekiswe ukuthi imithwalo yemininingwane efanele kuphela ikhasimende.
Ngokunikezwa lelo nani lakudala labantu abanesikhathi sokunakwa esibonisa amamitha angama-50, kubalulekile ukuba nekhasi elisheshayo okulula ukulifunda. Ngezansi kudeshibhodi ozoyisebenzisa ukulandela isivinini sakho.
Njengoba ukwazi ukubona, isibonelo sekhasi esilisebenzisayo sihle kakhulu. Inamaphutha amancane ambalwa ongawalandelela, kepha lawo angaba yindawo yokujika yokuthengisa okungase kube khona. Kodwa-ke, le deshibhodi ichaziwe kuhlobo lwe-desktop. Uma sibheka inguqulo yeselula yaleli khasi le-web, izoveza okuhlukile.
Ngamaphesenti angama- 81 abantu baseMelika abasebenzisa ama-Smartphones, kufanele usazi isidingo sokusebenza kweselula. Isibonelo esingenhla sitshela ukuthi le webhusayithi imaphakathi nezimbangi zayo. Kodwa-ke, uSemalt uyasebenza okuthatha ngaphezulu kwesilinganiso.
Ideshibhodi entsha kaSemalt ingangisiza kanjani ukuthi ngifike phezulu kwaGoogle?
Inani lemininingwane oyisebenzisa nsuku zonke iyamangaza. Ngenxa yalokhu, akunakwenzeka ukuhambisana nokugaya kwansuku zonke. Uma uhlanganisa imisebenzi yakho ejwayelekile njengomnikazi nokuphatha iwebhusayithi, lokhu kuzokhipha komunye.
Inqubo kaSemalt iyindlela yokwenza lula inqubo yokuphathwa kwesiza ngendlela lapho ungabhekisa ukunaka kwakho emuva lapho kudingeka ukuba khona: ibhizinisi lakho. Neqembu elizinikele lochwepheshe likaSemalt likujabulele ukukuqondisa nge-SEO, uzozithola uphakathi kwe-Google ephezulu.
Ideshibhodi imiphumela kaSemalt yenqubo yokubona lokho umthengi akufunayo. Ngohlelo olulula, sifuna ukuqiniseka ukuthi awugcini ngokuthola izibuyekezo njalo ekuphathweni kwemikhankaso yakho ye-SEO, kodwa uyaqonda futhi uyabona ukukhula okulethwa yile mikhankaso kubhizinisi lakho.
Uma ungumnikazi webhizinisi futhi ufisa ukuhlanganyela traffic, uSemalt ulungele ukukuyisa endaweni lapho ungadonsela khona ithrafikhi, uhlanganyele ikhasimende, futhi ukhuphule ukuthengisa.